Badhasaabka Gobolka Maroodi-jeex oo kulan la yeeshay Iskuduweyaasha Gobolka | FooreNews
Home wararka Badhasaabka Gobolka Maroodi-jeex oo kulan la yeeshay Iskuduweyaasha Gobolka
Badhasaabka Gobolka Maroodi-jeex oo kulan la yeeshay Iskuduweyaasha Gobolka
fooreApr 09, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)-Kulan balaadhan oo ay isugu yimaadeen gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka Maroodijeex iyo isu duwayaasha wasaaradaha ee gobolka maroodijeex ayaa maanta ka dhacay xafiiska Gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee magaalada Hargaysa.
Kulankan oo ujeedadiisu ahayd sidii maamulka gobolka iyo isku duweyaasha gobolku isku xaal waraysan lahaayeen.
xaaladaha degmooyinka, iyadoo ay mas’uuliyiinta degmooyinka iyo isuduwayaashu mid mid uga xog warameen xaaladaha dhabta ah ee ka jira degmooyinkooda.
Gudoomiyayaashu waxay isla qaateen in gobolka ay ka jirto xaalad abaareed iyo xaalufin ba’an oo lagu hayo deegaanka.
Ku simaha Gudoomiyaha Gobolka Maroodijeex ahna gudoomiye ku xigeenka Rashiid Axmed Maxamed oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inay isku duubnidu u leedahay bani’aadamka ahmiyad balaadhan, mas’uuliyiinta Degmooyinka iyo Gobolka Maroodijeex-na looga baahan yahay inay mideyaan maskaxdooda, caqligooda iyo cududooda, kulanka maantuna uu yahay mid lagu go’aansaday in bishiiba mar uu dhaco kulan noocan oo kale ah.
Rashiid Axmed oo ka waramayey kormeer ay mas’uuliyiinta gobolku ku soo mareen degmooyinka ayaa sheegay inay soo arkeen xaalada dadka iyo xoolaha ee degmooyinka Gobolka, ayna warbixin rasmi ah ka soo sameeyeen.
Kulankan oo ah kii ugu horeeyey ee ay isugu yimaadaan Gudoomiyayaasha degmooyinka iyo isu duwayaasha gobolka Maroodijeex oo uu weheliyo maamulka heer Gobol tan iyo itii uu xilka Gudoomiyaha Gobolka si ku meel gaadh ah u qabtay Mudane Rashiid Axmed Maxamed ayaa waxaa laga soo saaray labo qodob oo baaq Qaylo dhalaan ah oo kala ah: Xaalufinta deegaanka lagu hayo iyo abaarta isa soo taraysa ee gobolka ka jirta.
Previous PostGuddoomiyihii Jaamacadda Hargeysa oo Xilkii iskaga casilay cabashadii ardaydiisa Next PostLaba Urur siyaasadeed oo daboolka ka qaaday inay isku biireen